Dhaqdhaqaaqa Dhageystayaasha - Kooxaha, Ciyaartoyda, Ciyaartoyda, Taageerayaasha -Waxaad dooneysaa hadda - NAB faafin warar by Broadcast Beat. Wargeyska rasmiga ah ee NAB Show, Soo-saaraha NAB Show LIVE
Home » News » Ku shaqaynta Dhageystayaasha Live - Kooxaha, Ciyaartoyda, Garabyada -Waa hadda
Ku shaqaynta Dhageystayaasha Live - Kooxaha, Ciyaartoyda, Garabyada -Waa hadda
"Waad ogtahay inaanan waligey la kulmin guys. Sidaas darteed, waa inaad u sheegtaa magacyadooda, ka dibna waan ogaan doonaa cidda ka ciyaareysa kooxda. "- Bud Budello, "The Nineties Nineties, "Universal Pictures, 1945
Ka hor inta aynaan jarin xuddunta, waxaan ka yaabnay in laga yaabo in laga yaabo in kubada cagta iyo golf inay ka lumaan jilitaankooda (iyo daawadayaasha) sababtoo ah soo-dhoweynta. Dhamaanteen, waxaan heysanay shan kubbadood, baseball, kubadda cagta iyo kan NASCAR, iyo sidoo kale laba kanal oo golf leh oo ku jira xirmooyinkeena weyn mana aha qof waliba dhab ahaan taageeraha isboortiga ... sax?
Okay, Bowl Super (jaceylka xayeysiisyada) iyo daboolka danbe ee Tiger Woods 'oo soo laabanaya si uu ugu guuleysto tartan weyn ka dib shan sano oo qallalan oo qallafsan ayaa barbaro badan sameeyay, laakiin aan ahayn wax badan.
Marka la eego IBC, waxaa soo cusbooneysiiyay farxad ku saabsan warbaahinta iyo fursadaha wargeysyada, iyada oo ay ugu wacan tahay koritaanka degdegga ah ee daaweynta IP-ku salaysan ee IP-ga.
Kubadda cagta, kubada cagta, kubadda baseball, kubbadda kolayga ayaa marwalba ku lahaa meel diirran oo ka mid ah wadnaha maamulayaasha 'sababtoo ah aynu ku qiranno, waxay keeneen adoonsi weyn iyo in ka badan qaybtooda cadaalad ah ee goobaha.
Game Rehash - Inkastoo wadahadalka biyaha qaboojiyaha ee maanta ee fiidkii hore ama ciyaarta shalay / ciyaarta ay hadda tahay mid wali ah, weli wakhti weyn ayaa ka hadli doona tartanka iyo dib u daawashada ciyaaraha.
Kadibna waxaa jiray PPV-ga faa'iido leh (mushahar kasta oo la bixinayo) sanduuqyada, fanka jismi ee isku dhafan iyo bandhigyada cayaaraha.
Hase yeeshee, ciyaaraha isboortiga sida dabbaasha, rookariska, qoob ka ciyaarka, cricket, lacrosse, skateboarding, drone / hotrod tartanka, iyo hareeraha ciyaaraha isboortiga ayaa looga tagay si ay naftooda ugu furtaan YouTube. Ama, haddii ay nasiib u yeesheen, in lagu daro ESPN +, Hulu Live ama maktabada daawada Amazon.
Laakiin sida laga soo xigtay Allan McLennan, Madaxa Sare ee PADEM Media Group, kooxo, horyaal, shabakadaha TV-yada, shirkadaha dijital ah iyo ciyaartoyda naftooda ayaa raadinaya habab cusub oo lagu xirayo taageerayaasha adduunka oo dhan leh OTT.
"Si sax ah, oo loo maro IP-ga wuxuu u taagan yahay door cusub oo cusub oo loogu talagalay MVPD iyaga oo awood u siinaya inay si toos ah u siiyaan daawadayaasha dhagaystayaasha," ayuu yiri McLennan. "Waxay siisaa fursado dakhli dheeraad ah; iyo in ka sii muhiimsan, xiriirka macaamiisha ee dhow.
"Dhacdooyinka maaliyadeed, kooxaha iyo cayaaraha ayaa diirada saari doona bixinta khibradda ugu wanaagsan ee dhaqaale ahaan," ayuu yiri. "Isla markaasna, xalal cusub ayaa laga yaabaa inay ka lumaan hawlaha sharci-darrada ah ee lagu iibinayo waxyaabaha tayada hoose leh.
"Tiknoolajiyada ayaa soo maray, waxaana intaa dheer hadda la geeyaa," ayuu sii waday. "Diyaarinta waxqabadka isboortiga ee IP-ga wuxuu noqon karaa mid aad u wanaagsan, badanaa oo loo dhan yahay, siyaabo badanna uga qaybqaadan karo tii hore ee TV-ga. TV-ga Ballan-qaadka wuxuu leeyahay taariikhda 50-sanadka; iyo dhawr sano oo keliya, bixinta IP-ku salaysan ayaa horay u soo guuray jaranjarada si ay u siiso daawadayaashu rabaan - inay ku noolaadaan wax kasta oo shaashad ama qalab ay jecel yihiin. Furaha ayaa soo bandhigi doona oo u bixin doona hab ku habboon taageerayaasha ay u baahan yihiin iyaga oo aan lagu jahwareerin sababtoo ah fursadaha. "
Iyada oo wax soo saarka qarashka jaban iyo kor u qaadista awoodda loo qeybiyo, waxaa jira dib u cusbooneysiin xiiso leh Isboortiga iyo eSports ayaa gaaraya daawadayaashooda gaarka ah iyo kuwa dhagaystayaasha oo sii kordhaya.
Sababtoo ah mid waliba wuxuu leeyahay dhagaystayaal si fiican u yaqaan (xitaa waxa uu ahaa ciyaaraha isboortiga), waxay ku yaalaan meel ay ku bixiyaan qiimeeyn dheeraad ah maalgeliyeyaasha cusub iyo xaalado badan, taageerada iidhehda (sida dakhliga).
Xayeysiinta - Marka macaamiisha isbeddelaan, markaa xayeysiiyaasha. Kordhinta, suuq-geynta ayaa isbedeleysa nuxurkiisa si loogu diyaariyo shaashadaha moobiilka kuwaas oo u baahan u ah habab cusub iyo isdhexgalka si loo soo jiito dareenka daawadayaasha.
Warbixin cusub oo lagu magacaabo Limelight ayaa lagu ogaaday in boqolkiiba 60 macaamiisha adduunka ay jecel yihiin in ay daawadaan (oo ay ku bixiyaan) internetka ciyaaraha haddii ay ku balanqaadi karaan inay ku raaxaystaan ​​shaashadda ay doortaan iyaga oo aan dib u eegin dib u dhicid, gardaro ama arimo kale.
Macaamiisha telefoonku waxay bixiyaan adeegyo dheeri ah oo ka baxsan xadhkaha. In kabadan kala badh (59 boqolkiiba) waxay ku biiraan ugu yaraan hal muuqaal oo ah adeegga dalabka (VOD).
Caymiska telefishinka waxay ku darsanayaan TV-yada caadiga ah oo leh fiidiyoowga internetka, oo bixiya celcelis ahaan adeegyada akawnka 1.2, halka kuwa aan cidi ku duubnayn ay bixiyaan adeega 0.7.
Millenniyadu waxay u horseedaan isbedel caalami ah oo lagu sameeyo fiidiyoowga internetka. Jawaabeyaasha da'da 18-35 waxay daawadaan video dheeri ah oo badan marka la baahiyo. Dhalinyarta da'yarta ah (da'da 18-25) waxay daawadaan celcelis ahaan sagaal saacadood-13 daqiiqo oo fiidiyoo oo internet ah todobaadkiiba, marka la barbardhigo lix saacadood, daqiiqado 11 oo ah TV-ga caadiga ah. 15 boqolkiiba da'yarta dhalinyarada ah ayaa ku jira saacado ka badan 20 usbuucii daawashada video-ka.
Macaamiisha ayaa joojin doona adeeggooda sababtoo ah qiimaha kor u kaca. In ka badan kala badh (55 boqolkiiba) macaamiisha adduunka ayaa sheegaya in qiimaha kororka ay tahay sababta ugu weyn ee looga joojiyo adeegga SVOD. Ku dhawaad ​​kala badh (46 boqolkiiba) xusuus isku midka ah udoodkooda.
Booqashada internetka ayaa si ballaaran u kala jeeda waddanka. Viewers ee Filibiin daawashada filimka ugu badan ee internetka ah siddeed saacadood, saacadaha 46 asbuucii, waxay si dhow ula socdeen Hindiya iyo Mareykanka muddo siddeed iyo badh saacadood ah oo daawashada toddobaad kasta. Jarmalka ayaa ah midka ugu hooseeya daawashada muuqaalka daawashada shan saacadood, laba daqiiqo.
Sida laga soo xigtay McLennan, ciyaaraha isboortiga iyo isdhexgelinta isdhexgalka (qalabyo badan) waa qaar ka mid ah qaybaha ugu kobcaya ee warbaahinta.
Sababtoo ah helitaanka diyaarinta CDNs ee la xaqiijiyay (shabakadaha nuxurka bixinta) iyo sababtoo ah Internet-ka iyo Wi-Fi-yada ayaa ku jira, kooxo badan oo isboorti oo cusub ayaa ka fakaraya inay samaystaan ​​jadwalkooda ku aaddan dhacdooyinka, muuqaalka taariikheed iyo muuqaal ka danbeeya muuqaal / Qoraal adag oo wax ku ool ah.
OTT Bandwidth - Si loola kulmo rabitaanka isbedelka macaamiisha laga bilaabo TV-ga balanta ilaa imtixaanka OTT, ATSC iyo SMPTE horumariyay heerarka cusub ee soo bandhigi doona fiidiyooga si sahlan oo waxtar leh DTC. Si loo qabto wax badan oo ka mid ah macaamiisha daawashada moobiilka, telcos wuxuu horumariyay 5G kaasoo bixin doona waxqabadka bandwidth ee wanaagsan si loo eego qorshayaasha xogta iyo Wi-Fi.
HD, UHD, 4K / HDR iyo ciyaaraha isboortiga ayaa mar horeba loo duubay maalin kasta natiijooyin fiican.
Intaa waxaa dheer, McLennan, oo ka mid ah dadka ugu horreeya ee ka tirsan OTT iyo barnaamijka dalbashada, "SMPTE(Society of Motion Picture & Television Engineers) waxay qabteen shaqo aad u fiican oo lagu xoojinayo ATSC (Guddiga Nidaamyada Telefoonada ee Horukacsan) 3.0 kaas oo si fiican loo filayay oo loogu talagalay inay u fidiyaan isla mar ahaantaana si dhakhso ah u keenaya aragtida malaayiin qof.
"Developers 5G waxay sidoo kale qabteen shaqo aad u fiican oo ah inay dhamaystiraan heerkooda" ayuu ku daray. "Wadajir, waxay ku siin karaan mulkiilayaasha iyo macaamiisha aragtida ay doonayaan, gaar ahaan isboortiga.
Shirkadda 2018 Mobile World (MWC), telcos waxay dhawaan ku dhawaaqday inay heli doonaan tiknoolajiyada 5G ee loo wareejiyo suuqyadda 50. Xaqiiqdii, Verizon wuxuu furay afar suuq oo bishan soo dhaafay iyo Ericsson saadaasha ah in 10 + boqolkiiba suuqyada caalamiga ah ay noqon karaan 5G-awood u leh 2020.
"Labada waxay siin doonaan mashruuc adag oo loogu talagalay xawaaraha sare ee xawaaraha sare," ayuu yiri McLennan.
"Sinclair, Pearl iyo dhowr wariyaal oo caalami ah ayaa horey u soo waday adeegga ATSC natiijooyin fiican, waxaana intaa dheer oo la qorsheeyay in la soo saaro sanadkan iyo xiga." ayuu yiri
Xawaaraha Shuclada - Iyadoo aduunka oo dhan laga heli karo shabakadaha internetka iyo moobaylka si dhakhso ah loo ballaariyo loona horumariyo, macaamiisha waxay si sahlan ugu raaxaysan karaan madadaalo, qani ah madadaalo, warar iyo isboortis la'aan iyada oo aan la helin xanuun muruqa ah oo dhiman.
Waqti la seegay, ciilka oo baqdin geliyey foorjirinta, codka ka soo baxa la socoshada ficil, content ku soo gali doona seconds 1-5 shaashadda qof kale ka hor intaadan aragto waxay qayb ka ahayd caqabadda ugu weyn ee soo wajahday warshadaha fiidiyoowga ah - latency.
Hoos u dhigidda qarsoodiga, khibradda soo dhaweeyaha, waxay ku qanacsan yihiin macaamilka iyo in yar yartahay dhiirigeliyaha isboortiga ayaa gujin doona ama beddelaya adeegyada.
Dhamaan CDN-yada iyo bixiyeyaasha / qalabka software-yada waxay diiradda saarayaan isku dayga ah inay keenaan waxqabadka hoose ee hoose HD, UHD iyo 4K / HDR content.
Waxay samaynayaan si joogta ah oo kalsooni leh ... iyo tiknoolajiyada cusub, waxay ka sii fiicnaan doontaa!
Horumarinta Codec - Tixgelin dhowr ah ayaa la sameeyey si loo furo tiknoolijiyada siriyaalka / qufucariga iyo weelkiisa si ay ugu suurtagasho OTA qaybinta fiidiyowga tayo sare leh oo ay ka mid yihiin 4K / HDR ciyaaraha isboortiga iyo sidoo kale bandwidth loogu talagalay akhristaha kale, soo bandhigida iyo wadahadalka.
Xalka cod-bixinta ee gobolka oo dhan, gaar ahaan xalka sida V-Nova iyo sidoo kale Bitmovin, ATME iyo kuwo kale, ayaa durbadiiba loo isticmaali jiray si loogu taageero qaababka fiidiyowga ciyaaraha sida HD, HD Ultra 4K, iyo 360 VR.
Waxay sidoo kale taageerayaan HLS (HTTP Live Streaming Live), HEVC (Codeynta Caawinta Heerka sare) iyo MPEG-DASH (Qalabka Is-beddelidda ee HTTP).
Dhammaantood waxaa lagu horumariyay jimicsi cusub oo aad u sareeya HDR pixels (nala aamini, waxa loola jeedaa daawashada dilaaga on screen).
Ujeedada - waxay bixisaa waayo-aragnimo heer-heer-baahin ah dhammaan qalabyada IP-ga iyo in ay xoojiyaan heerar qoto dheer oo ah ka qayb qaadashada macaamiisha. Xalalka sida Net Insight's Sye waxay u sahlaysaa inay ku raaxaystaan ​​dhaqdhaqaaqyada qalabka isdhexgalka - dhacdada ku jirta shaashadda weyn, xiritaanka / asalka ah ee 2nd shaashadda iyo qoraalka / tweeting on 3rd shaashadda isla waqtigaas.
Multitask - Inkastoo "ciyaarta weyn" weli laga arki karo shaashadda telefishinka, daawadayaasha ayaa sii kordhaya iyagoo isticmaalaya shaashadahooda kale si ay u bedelaan warar / macluumaad ku saabsan ficilka iyo xitaa daawashada aragti kala duwan iyo soo dhawaansho ka qaybgalayaasha. Qodobada la kobciyay waxay kordhisaa qiimaha macaamilka ee macaamilka iyo kooxda shakhsi ahaaneed.
Woody Woodhall, oo ah madaxweynaha Allied Post, ayaa igu dhex darey dhowr sano ka hor in habka filimka filimka uu yahay midka ugu muhiimsan, oo hoos u dhigaya, hal-abuur leh filim weyn.
Waxaa laga yaabaa inay ka sii muhiimsan tahay dadka runtii doonaya inay gebi ahaanba ku dhameeyaan dhacdooyinka cayaaraha.
Waad ku qanacsan tahay, qaybta ugu fiican ee cayaartu waa codka haddii uu dareemayo inuu ku dhuftey barta linebacker, dharbaaxada kubbadda cagta, shabakad raxan ah oo ka soo horjeeda kubbadda teniska, isku xirka labo baabuur oo NASCAR ah ama hadalka qashinka LeBron iyo Draymond.
Haddii aan cod lahayn, cayaaruhu wuxuu noqon lahaa mid caajis ah!
Hadday tahay Dolby Atmos ama codka codka guud, waa kan HD, UHD, 3D ama cod maqal ah oo kugu haya "ciyaarta."
Qeyb ka mid ah Cadaadiska
Burcad - Lama oggola, qaybinta sharci darrada ah ee munaasabadaha cayaaraha iyo dhaqdhaqaaqyada ayaa ku kacaya cayaaraha isboortiga, dhacdooyinka iyo kooxaha sida $ 9B sanadkiiba. Intaa waxaa dheer, goobaha burcad-badeedda ayaa sidoo kale bixiya daawadayaashooda ku daray waxyaabo ay ka mid yihiin xatooyo iyo xatooyo aqoonsi.
Qaybta ugu liidashada ciyaaraha isboortiga (iyo content video) waa burcad-badeednimada.
Koobka adduunka ee kubadda cagta ee Ruushka ayaa waxaa ku jiray websaydii 2,637 ee semi-finalka ee Facebook, YouTube, Twitch, iyo Periscope. Waxaa ku dhowaaday aragtiyo 30M ah iyo 3,653 finalka Faransiiska iyo Croatia oo ka badan aragtiyo 60M.
Taas oo ah "yareyntii" (isbaddelkii la waayay) ayaa ku kacday FIFA iyo kuwii sharci ahaan u xaqiijiyay xuquuqda malaayiin!
Haa, milkiilayaasha xuquuqda waxay si toos ah u aqoonsan karaan dembiileyaasha xaq u leeyihiin cinwaanka IP, laakiin sharciyadu waxay u baahan yihiin mulkiilayaasha xuquuqda daabacaadda inay u diraan ogeysiisyada bogagga shabakadaha, iyaga oo waydiisanaya inay hoos u dhigaan fiidiyowyada xadgudubka ah.
Nasiib wanaag, waxaa jira qalab sida kuwa ay soo bandhigeen NAGRA oo leh meel amaan ah oo ammaan ah waxayna ilaalin kartaa dadka daawadayaal iyo milkiilayaasha content ka hor inta aan loo baahnayn dacwad.
"Isku celceliska celceliska ciyaaraha isboortiga ayaa ka fiirsan kara burcad-badeednimada dambi aan dhibbaneyn," McLennan ayaa xusay, "Laakiin tani waxay khaldan tahay dhowr heer.
Xatooyada - Goobaha burcad-badeedku waxay si joogta ah u bixiyaan qiime jaban ama "bilaash ah" oo lagu daaweynayo tallaabooyinka cayaaraha oo ka kala socda Koobka Aduunka, US Open, Bowl Super, Rose Bowl iyo xitaa iskuulada dugsiga sare; badanaa leh tayada yar yar iyo daacadnimada marka loo eego milkiilayaasha, maalgeliyeyaasha doonaya inay bixiyaan.
"Maxay dadku ogaan waayeen in ay halis weyn ku sugan yihiin iyaga oo ku riyaaqaya isboortiga burcad-badeednimada," McLennan ayaa ku nuuxnuuxsaday. "Nidaamka sharci darrada ah waxaa sidoo kale ku jira 'sifooyin dheeraad ah' sida xayawaan, ciribtirka cybertheft iyo waxqabadyo kale oo dambiyeed kuwaas oo sameeyn kara dhacdooyinka cayaaraha jaban oo qaali ah.
Helitaanka caalamka ee xawaaraha iyo tiknoolajiyada ayaa u suurtogelisa in si dhakhso ah loo gudbiyo waxtarka tayo sare leh sida cayaaraha oo lagu arki karo shaashad kasta xilliga dhabta ah ama marka ay ku habboon tahay dhiirrigelinta.
Kordhinta, fasaxyada cayaaraha, kafaala-qaadayaasha iyo cayaartooyda ayaa leh qalab raaxo leh oo xal loogu heli karo iyaga oo bixiya dhacdooyinka maxalliga ah, goboleed, qaran iyo deegaaneed iyo hawlaha qiimaha macmiilka aadka u wanaagsan.
Waxaan mar hore aragnay in taageerayaasha isboortiga ay horey u qabteen adeegyo ku-meel-gaadh ah oo ay ku noolyihiin oo ay aad u xiiseynayaan, daawadayaasha isdhexgalka.
Dhibaatooyinka isboortiga ee qoto dheer, ayaa sii kordhaya siinta macaamiisha tooska ah.
Isboortiga isboortiga ee waaweyn, kuwa yaryar iyo kuwa isboortiga sii kordhaya ayaa leh fursad ay ku dhistaan ​​cod sarreysa oo ka jawaab celiya taageerayaasha casriga ah ama taageerayaasha.
Iyada oo loo marayo streaming OTT, sawirayaashu waxay si sahal ah u heli karaan iyada oo leh waxyaabo badan oo xaddidan oo kaliya oo ay xaddidan yihiin fikradaha bulshadu -waxay had iyo jeer ka dhigaan mid adag.
Kadib, qof waliba wuu guuleystaa!
Qofna ma doonayo inuu daawadayaasha ku dhiirrigeliyo inuu ku soo celiyo tilmaamaha dib u soo noqoshada sida Lou oo kale Bud, "Isla same sida aad! Isaga oo kale sidaad tahay! Waxaan kubadda u tuurayaa Yaa. Qof kasta oo kubada ku dhaco iyo ninka ayaa ku socdaa ilaa labaad. Yaa kubad u qaadaya kubbadda oo wuxuu ku tuuraa Maxuu yahay. Maxay ku dhejineysaa aniga Ma ogi. Anigu ma ogaanayo in uu dib ugu soo laabto Tomorrow, ciyaar seddexleey ah. Qof kale ayaa kor u kaca oo wuxuu ku dhuftaa kubad dhaadheer u ah sababtoo ah. Waa maxay sababta? Ma aqaano! Wuxuu ku jiraa kaalinta 3aad mana siinayo darn! "
Madaxweynaha at Marken Communications
Andy waa hanta iyo Madaxweynaha Marken Communications Inc. Marketing iyo Consultant Communications, ku taala agagaarka San Francisco ee August 1977 in Present.Marken Communications waa hay'ad adeeg buuxa in xoogga on ganacsiga / qorshaynta suuqa, meelaynta, horumarinta, iyo isgaarsiinta a . Hay'adda sano 30 ayaa ku lug leh kala duwan ee hawlaha shirkadaha iyo suuq. Experience ka mid ah qorshaynta istaraatiijiga ah iyo suuqa iyo dil kula isgaarsiinta iyo shirkadaha Internet oo ay ku jiraan AT & T iyo CERFnet iyo sidoo kale in lagu kaydiyo, maamulka kaydinta iyo xalalka video la shirkadaha ay ka mid yihiin Philips, InterVideo, Ulead, OWC, NewerTech, Sonic, Corel, Matsushita, Pinnacle, yaabtid , Cyberlink, Mountain Computer, Nikon, Plasmon, NTI, xayeysiis Tech, Seytahay, Mitsubishi iyo Panasonic.
posts Latest by Andy Marken (arki dhan)
Ku shaqaynta Dhageystayaasha Live - Kooxaha, Ciyaartoyda, Garabyada -Waa hadda - November 7, 2018
Sinaanta, sida Filimooyinka Weyn, Waxay u Baahan Tixgelin Dhamaan Faahfaahinta - October 31, 2018
M & E Evolution wuxuu ka caawinayaa dhammaan Sawirada Sawirada Muuqaalka - October 17, 2018
Broadcast Engineer Broadcast Engineering Kaalinta isovideo, viarte, HDR, dhimista buuqa, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, hoos bitrate, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw Ott SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Fiilooyinka subtitling, Digital Nirvana, kormeerka warbaahinta, IBC TV Technology Ultra HD Forum Video Engineer xaqiiqada dalwaddii	2018-11-07
Previous: ARRIMAHA BULSHADA OO KA HELI KARTAA WAXYAABAHA LOOGU TALAGALAY EE SHEERAN 'DIVIDE' TOUR
Next: FilmLight wuxuu caddaynayaa balanqaadka jaaliyada quruxda badan ee Japan ee Inter BEE 2018
Hey Buddy !, waxaan ka helay macluumaadkan adiga kugu: "Ku-shaqaynta Dhageystayaasha Live - Kooxaha, Ciyaartoyda, Taageerayaasha -Waa hadda". Halkan waxaa ah bogga internetka: https://www.broadcastbeat.com/engaging-live-audience-teams-players-fans-want-it-now/. Mahadsanid.